Jetem Paris - uhambo oluya emzini amaphupho abo nengane
abazali abasebenzayo ukuthi ngingaphila kanjani zabo ngaphandle travel njengoba short-term phezu amabanga lamafisha. Kulokhu, akubalulekile kangako, lokho ezokuthutha isetshenziswa: ibhasi njalo, imoto yangasese, isitimela noma ibhanoyi. Uma uhamba nengane ngendlela izinto uyithayiphe eziningi, kodwa umqondo wokuthi kwakusadingeka udonse nge pram futhi ngezinye izikhathi kuholela okukhulu. Ukusiza izingane nabazali bazo bungafika Esilula imodeli ukusonga. Omunye wabo - umhlanga Jetem Paris.
Lokhu nomkhiqizi ezinamasondo is kahle esungulwe emakethe Russian. Umumo, bathumela, ukuhlukahluka kanye izinga lomkhiqizo kugcinwa ezingeni eliphezulu, futhi ngesikhathi esifanayo intengo enengqondo iningi abathengi.
Into yokuqala ukuthi abambe iso lakho uma ubheka Jetem Paris, - it is a elikhanyayo, umbala ayegcwele. Yiqiniso, zikhona amakhophi esenziwe amathoni kunalokho ithule kepha izinhlobo eziningi bakhangwa ke ngemibala yayo non-standard, okuyinto kangaka uyakuthanda abasha futhi asebenze.
Uma sikhuluma ohlangothini lwezobuchwepheshe umbuzo, lokhu stroller has zonke izimfanelo ezidingekayo ukuze kube: Kulula (isisindo saso singamakhilogremu esingaphansi 7 Kilos), kalula ukusonga, futhi compactness.
Kuyinto wajabula Jetem Paris backrest kungenziwa landiswa sesimweni cishe ovundlile (170 degrees). Olele ngaleyo ndlela ngokwanele eside (82 amasentimitha) futhi ububanzi (34 cm). Ukuze induduzo izinyane Indoda ehamba ngesihlalo sabakhubazekile kukhona cushioning. A ikhava ngezinyawo ukuvikela kusukela sezulu. Ngakho uphumule ingane kulula kakhulu.
Abazali abanjengawe izibambo namaqhosha futhi imali eliqinile obhasikidi. Okungenzeka ukususa Upholstery futhi ugeze futhi kuwusizo (umama uyazi ukuthi ukugcina stroller ahlanzekile kunzima kakhulu, kodwa ukuze ugeze khona ngokuphelele ngaphansi efulethini zingavumi kakhulu).
sabakhubazekile design ngempela esisebenzayo. Uhlaka kusetshenzwe nokugqwala inhibitor, futhi isetshenziswa ekukhiqizeni lendwangu olumelana lantambama, ngakho ungaqiniseka ukuthi isimo sezulu ngeke konakalisa ukubukeka Jetem Paris. Thenga ke ufuna futhi ivumelana nezimo: amasondo phambi abaphendukela, kodwa ingalungiswa, uma kunesidingo.
Ngu nebubi zihlanganisa ukuntuleka strollers kuhlanganisiwe amanetha omiyane, okuyinto okufanele zithengwe eceleni, kodwa ethile kuba, e onobuhle cishe yonke efanayo.
Jetem Paris - Umsebenzisi Izibuyekezo
Ngokuyinhloko kule sabakhubazekile abasebenzisi besabela kahle. ifasitela ukuncoma ukubukwa esisogwini ophahleni hood, okuyothi ingaqashelwa kuka encane umatasa.
stroller izibambo awantshintsheki ukuphakama, futhi kuhloswe abantu ukuphakama Ngokwesilinganiso, ukuze ephezulu abazali ngaphambi oda wakhe, kungcono ukuhlola Ukusebenziseka yayo.
Ayikho izikhalazo ezithile ukuze Jetem Paris bewumsebenzi. Kukhona Izibuyekezo ezingezinhle ngokuphathelene amortization kohlelo, nakuba uma kuqhathaniswa nalabo ezisebusweni ezinamasondo ekilasini efanayo, futhi phezu Transformers noma nemibhede.
abathengi ngamunye aveze ukuthi, naphezu kwalokho okushiwo abakhiqizi, Upholstery Indwangu namanje kudlule amanzi, futhi ngokuqinisekile kusimo abalulekile. Into abangaziwa ukuthi ngeke zonke ukugubha, nakuba lesi sici kubalulekile ngempela. Ngokuvamile ngamaphutha ezisobala umkhiqizo, uma ikhona, ulwazi otholakala khumbula ngamunye.
Kufinyeta, singasho ukuthi inani layo ufaneleke stroller. Ngo inani elincane umthengi uthola inqola kusukela inkampani ethile yaseYurophu quality eyamukelekayo. Yiqiniso, asikwazi ngokuthi okuphakade, kodwa ezimbili - ezintathu yokusebenza sonyaka kuyoba okwanele. A stroller, ikhwalithi ezingasetshenziswa ukudlulisa kubo ezizukulwaneni ngezizukulwane, kukhona imali yenza okuhluke kakhulu.
Eside ukuba silondoloze rose in a vase kanjani: a izimfihlo ezimbalwa
Kukhona izimvilophu eyenziwe ngesikhumba semvu izinsana - lesikahle kakhulu enganeni yakho
Ihhotela Caribbean Umhlaba Nabeul 4 * e Tunis
Indlela thunga nightgown, ngakho kungeke kwazi muntu ukuthi wayengasayi Ukweba ezitolo?